Na-eso RayHaber | raillynews
Dịka usoro a ga --eme megide ọrịa coronavirus (Covid-19), a ga-amachi mbubata na 23-26 Mee 2020, dịka mkpebi nke Gọvanọ nke Ankara, HIFZISSIHHA, akara ụbọchị 21.05.2020 wee gụọ 2020/37. [More ...]
Yiri mkpuchi na Transportgbọ njem Ọha bụ Mmanya na Ankara
Dị ka mkpebi nke Ankara Governorship, ọ ghọọla ihe dị mkpa maka ndị ọkwọ ụgbọala na ndị njem iji mkpuchi karịa na ndị njem na ụgbọ elu ọha na-eji ihe karịrị otu onye njem. Na mgbakwunye na mkpebi ọ bụla, [More ...]
Ikesa ihe nkpuchi nke n’enweghi nsogbu, ugbo ala nke Ankara
Onye isi obodo Ankara Obodo Mansur Yavaş mara ọkwa na ndị isi obodo ukwu ga-ekesa nkpuchi ga-eme ka ihe mkpuchi ihu maka ụmụ amaala na-eji ụgbọ njem ọha. Otu ndị uwe ojii, bọs EGO na Rail Systems [More ...]
Obodo Ankara abawanyelarị usoro ya kemgbe ọnwa March n'ihi ọrịa coronavirus (Covid19), bụ nke emetụtala ụwa niile. Dọọ aka na ntị ma tụọ ụmụ amaala ugboro ugboro n'ihe ize ndụ nke ntiwapụ ahụike ọha na eze [More ...]
Obodo Ankara na-aga n'ihu na-eme ihe n'ime oke iji luso ọgụ coronavirus. Site na nkuzi nke onye isi obodo ukwu Mansur Yavas, ewepụtara mkpebi ịdọ aka na ntị ọhụrụ. Nhicha ebe ọ bụ na ụbọchị mbụ ruo na Gölbaşı iche iche mpaghara [More ...]
Onye isi obodo Ankara Obodo Mansur Yavaş na-adọkarị ụmụ amaala aka na ntị site na akụkọ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ n'ime oke ọgụ nke ọrịa coronavirus. Ndị njem karịrị afọ 65 na-eji ụgbọ njem ọha na nso nso a [More ...]
Obodo Ankara gara n'ihu na-agbasi mgba ike na Isi Obodo site na ịme ihe ọhụụ megide ọrịa coronavirus. Actorylọ ọrụ achịcha Halk na-eme ka ịdị ọcha dị ọcha na ọnụ ahịa ahịa, ọkachasị na mpaghara mmepụta, ebe ọha na eze [More ...]
Enweghị mmerụ ahụ na kaadị ndenye ego maka ụmụ akwụkwọ Capital
Isi ụlọ ọrụ EGO gbochiri ọnwụ nke ikike n'ihi eziokwu ahụ bụ na ụlọ akwụkwọ enweghị ike iji kaadị ndebanye aha ya na ntinye ego nke puku narị abụọ maka 60 TL n'ihi ezumike ahụ. Onye isi obodo Ankara Obodo Mansur Yavas, [More ...]
Ndokwa maka ezumike nke Ankara Metro, Ankaray na EGO Bus Schedule
Mgbe ezumike nke ụlọ akwụkwọ dị n'etiti usoro coronavirus, nhazi nke EGO General Directorate mere n'oge elekere na bọs. Transportationgbọ njem njem ọha nke metụtara EGO na-arụ ọrụ na “Semester Break Service Program” malite na taa. [More ...]
N'ime isi obodo ahụ, Obodo ukwu na-aga n'ihu na-alụ ọgụ megide ọrịa ntiwapụ. Inkpachapụ anya n’ọtụtụ ebe site na sistemụ ụgbọ ala ruo bọs, site na AŞTİ ruo n’ọrụ ọrụ Mgbakọ Obodo, site na Ntụrụndụ ruo n’ụlọ nke ụlọ ọrụ na-abụghị nke gọọmentị na-enye ọrụ ọha. [More ...]
Obodo Ankara emeela ka okpukpu abụọ ghara ịdị na ya ma na-egbochi ya iji gbochie ihe ọghọm nke ntiwapụ na Rail Systems, Ebe Ndụ Ezinaụlọ, Ebe Ndị Ntorobịa na AŞTİ, nke ọtụtụ puku ndị njem na-eleta kwa ụbọchị. [More ...]
Ihe echefuru echezọ maka ụgbọ njem ọha na Ankara Ga-ere
EGO General Directorate ga-anapụta ihe 2018 n’ime ihe 437 ndị njem chefuru na 186, ebe ihe ndị ọzọ ka ga-ere site na ịre ahịa na Machị 21. Otu ihe a ga-ere ga-abụ laptọọpụ [More ...]